ဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ၎င်းကိုရေးဖွဲ့ထားသည့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်အကြောင်းအရာများ ခရီးသွားသတင်းများ
လူးဝစ် Martinez | 09/09/2021 11:00 | ယဉျကြေးမှု, Espana
ဘယ်လိုနားလည်လဲ ဂါလာစီယံဒေသဝတ်စုံ ယခင်ကဤဒေသရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသုံးသောဆေးကိုယခင်ကသုံးခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အလုပ်များအတွက်သုံးသောအရာသည်အားလပ်ရက်များတွင်သုံးသောအလုပ်နှင့်မတူပါ။ ထိုနည်းတူစွာကွဲပြားသောပြည်နယ်များနှင့်ဂါလီစီယာကောင်စီများအကြားကွဲပြားချက်များလည်းရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ဂါလီစီယံဒေသဝတ်စုံသည်ရှေးခေတ်ကတည်းကအခြားစပိန်လူမျိုးများထက် ပို၍ တူညီသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်မှုများနှင့်အရိပ်များရှိသော်လည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးသည်တူညီသောအ ၀ တ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ခြိုးခြံခြွေ နှင့် အရောင်မျိုးစုံ သူတို့အားလုံးထဲက မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို Galician ဒေသဝတ်စုံအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်သင့်အားဖိတ်ကြားသည်။
Galician ဒေသဆိုင်ရာဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားသောဂီတအဖွဲ့
Galicia ၏ပုံမှန် ၀ တ်စုံ၏မူလအစအကြောင်းပြောရန်အလွန်ခက်ခဲသည် (ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ချန်ထားခဲ့သည် ဤဒေသရှိလှပသောနေရာများ) ့။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကရာစုနှစ်များစွာကိုပြန်သွားတယ်။ ကျေးလက်နေပြည်သူများသည်သူတို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များ၏ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ပြီးသူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့သည်။
အမှန်တော့ဒီအ ၀ တ်ကို ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိလေ့လာဖို့မစခဲ့ဘူး အချစ်ဇာတ်လမ်း ၎င်းသည်မြို့များရှိတိုင်းရင်းသားများ၏ရိုးရာဓလေ့များကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ ဤသည်၏ရလဒ်ဖြစ်သည် ဂါလီယံရိုးရာလူ့အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ပညာတတ်များကဖန်တီးသည် Emilia Pardo Bazán o Manuel Murguia ဂါလီစီယန်တို့၏ရိုးရာဓလေ့များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။
၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများထဲတွင်ပုံမှန်အ ၀ တ်များ ၀ တ်လိုသောဒေသဆိုင်ရာတေးဂီတအဖွဲ့များကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စုံကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်မှုနှင့်ဖန်တီးထားသောကွဲပြားသောအထည်များဖြင့်ပိုမိုခေတ်မီသောအဝတ်အစားများဖြင့်အစားထိုးထားပြီးဖြစ်သည် စက်မှုတော်လှန်ရေးမရ။ ထို့ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
Galicia ၏ပုံမှန် ၀ တ်စုံသည်အနည်းဆုံးမှစ XVII ရာစု၎င်းသည်ကွဲပြားသောစာရွက်စာတမ်းများတွင်ထင်ရှားသကဲ့သို့ ဤအရာများထဲတွင်မင်္ဂလာဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အမွေစာရင်းများပါ ၀ င်သောမှတ်တမ်းများ ထိုအချိန်များတွင်၎င်းတို့သည်ထိုအရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် petrucios ဖက်ရှင်များကိုအမှတ်အသားပြုသောနေရာ၌၎င်း၊ အ ၀ တ်အစားနှင့်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သူများ၏အခြေအနေများကိုညွှန်ပြသည်။ ဥပမာ၊ အသနားခံစာအတွက်လက်ကိုင်ပုဝါများ၊ အိမ်ထောင်သည် (သို့) တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများအတွက်စကတ်များနှင့်ပျက်ကွက်မှုများမှသွေးလွန်တုပ်ကွေးများရှိခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူထိုဒေသဆိုင်ရာဝတ်စုံများကိုသူတို့၏ထုတ်လုပ်ရာသို့မဟုတ်မူရင်းအလိုက်ကွဲပြားသောနာမည်များရရှိသောသိုးမွေးသို့မဟုတ်ပိတ်ထည်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် picote, estameña, lamp nazcote, sanel၊ သို့မဟုတ် baeta.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ ဒီအထည်တွေအားလုံးဟာစက်မှုတော်လှန်ရေးကနေရိုးရှင်းပြီးဒီအချိန်မှာမြို့တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုဝတ်စုံထဲကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုနည်းတူစွာပင်လက်မှုပညာအသေးစိတ်ရှင်းလင်းမှုသည်အပ်ချုပ်အလုပ်ရုံများကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်၊ ဤအရာအားလုံးသည်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ တိုးတက်သောစံသတ်မှတ်ချက် ယနေ့တိုင်ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခဲ့သောဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စုံ၏
သမိုင်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရေးပြီးသည်နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ပုံမှန်ဂါလီစီယန် ၀ တ်စုံများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောအ ၀ တ်များအကြောင်းသင်ပြောလိမ့်မည်။ ငါတို့သူတို့ကိုသီးခြားတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကလိင်နှစ်မျိုးစလုံးမှာအဖြစ်များတာကိုမင်းသိတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ရိုးရာဂါလီစီယံ ၀ တ်စုံ၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည် အနီရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်စကတ်၊ ခါးစောင်း၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့်ခေါင်းစည်းပုဝါမရ။ ပထမအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ saya or ဟုလည်းခေါ်သည် Basquiñaမြေကြီးနှင့်မထိရသော်လည်း၎င်းသည်ရှည်လျားပြီး၎င်းသည်ခါးတွင်တစ်နှစ်ခွဲခန့်လှည့်ရမည်။
၎င်း၏အပိုင်းအတွက်ခါးစောင်ကိုစကတ်အထက်ခါးတွင်ချည်ထားသည်။ လက်ကိုင်ပုဝါကဲ့သို့၎င်း panel က၎င်းကိုတြိဂံပုံသဏ္toာန်ရရှိရန်တစ်ခြမ်းခေါက်ထားပြီး ဦး ခေါင်းကို၎င်း၏ပတ်လည်၌ချည်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံကောက်ရိုး ဦး ထုပ် (သို့) ဦး ထုပ်ကို၎င်း၊ တူညီသော်လည်းသေးငယ်သည်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးသည်ဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စုံ၏ပုံမှန်အ ၀ တ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သီးခြားဖော်ပြရန်ထိုက်တန်သည်။ ၎င်းသည်ကျောတွင်တင်ထားသောအစနှင့်အဆုံးနှစ်ခုကိုရင်ဘတ်မှတဆင့်ပြန်သွားပြီးနောက်၌ပြန်ချည်ရန်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းကိုကတ္တီပါနှင့် rhinestones များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၏အောက်တွင်သူသည်ရောဂါရလာသည် အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ ပိတ်ထားသောလည်ပင်း၊ အင်္ကျီဖောင်းဖောင်းများနှင့် pleats အနားကွပ်များဖြင့်
ဖိနပ်ဟုခေါ်သည် ပြောင်းဖူး o stringers များ ၎င်းတို့ကိုသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့နှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက်ပုံမှန်ဂါလီစီယံဝတ်စုံ၏အခြေခံအဝတ်အစားများပြီးစီးခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်နိုင်သည်။
ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် သိမ်းထားပါပိုကြီးသော apron ဖြစ်သည့်၊ ၏ refaixoအလှည့်၌ petticoats များနှင့် popolosဒူးနှင့်ထိရောက်သောအတွင်းခံဘောင်းဘီရှည်သည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အတွက်ဒီလိုပဲပြောနိုင်ပါတယ် shawlရှစ်ချွန်လက်ကိုင်ပုဝါ၊ ကယ်လီ သို့မဟုတ်မီဒီယာ၊ ချစ်တယ် နှင့် အနွေးထည်မရ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏အမည်ကိုလက်ခံရရှိသည် ဘားအံ ရင်ဘတ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်အဆင်တန်ဆာအစုံနှင့်ဝတ်စုံ၏အသေးစိတ်အချက်များကိုအဆုံးတိုင်စေသည်။
အမျိုးသားများအတွက်ဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စုံ ၀ တ်ဆင်ထားသော Pipers များ
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်အမျိုးသားများအတွက်ပုံမှန်ဂါလီစီယန်အဝတ်အစားများသည်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်သည် အနက်ရောင် leggings၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ စွပ်ကျယ်နှင့် ဦး ထုပ်မရ။ ပထမအမျိုးအစားများသည်ဒူးထိနိုင်သောဘောင်းဘီတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုအားဖြည့်ပေးသည် leggingsleggings အချို့လည်းရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းမှဖိနပ်သို့စီးသည်။ ခြေအိတ်များကိုအစားထိုးရန် ၁၉ ရာစုတွင်ပေါ်လာသည်၊ ၎င်းတို့ကိုသုံးနေဆဲဖြစ်သော်လည်း၊
ဘောင်းဘီအောက်တွင်သင်လည်း ၀ တ်နိုင်သည် cirolaမရ။ ၎င်းသည်အဖြူရောင်အတွင်းခံဘောင်းဘီဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအောက်မှချောင်းကြည့်သည်သို့မဟုတ်ခြေထောက်အားဖဲကြိုးဖြင့်ချည်ထားသောချည်သားထဲသို့ထည့်ထားသည်။
ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်တိုတိုနှင့်ဝတ်ဆင်သည်။ ၎င်းတွင်ကျဉ်းသောအင်္ကျီများနှင့်အလျားလိုက်အိတ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းအောက်၊acamisa နှင့်အထက် အင်္ကျီမရ။ ဒါ့အပြင်ခါးမှာပါပါတယ် faixa သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ပတ်လည်သွားသောခါးပန်းတွင်ပန်းကျွတ်များရှိပြီးအရောင်မျိုးစုံရှိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ montera o ပါ monteira ၎င်းသည်အမျိုးသားများအတွက်ဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စုံ၏ပုံမှန် ဦး ထုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်း၌၎င်းသည်၎င်း၏ Asturian အမည်များနှင့်၎င်း၏မူလအစသည်အလယ်ခေတ်သို့ပြန်ရောက်သည်။ ချမ်းအေးသောနေ့များအတွက်နားစည်များရှိသော်လည်းဂါလီယံသည်ကြီးမားပြီးလေးထောင့်ပုံဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ montera သည်မြိတ်ကို ၀ တ်လေ့ရှိသည်၊ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်သူတို့သည်ညာဘက်သို့သွားလျှင်၊ ၀ တ်သူသည်တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေပြီး၊ ဘယ်ဘက်မှပေါ်လာလျှင်၊ သူသည်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်လမ်းလွှဲပေးခဲ့သည် chapeus Vigo ဧရိယာတွင် beret အမျိုးအစားရှိပြီးသား၊ ခံစားမှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဦး ထုပ်များ (သို့သင်ဒီမှာရှိသည် ဤမြို့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်).
အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်ဘဲကျဆင်းသွားပြီဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်ဂါလီစီယံအဝတ်အစားတွင်အလွန်ထူးဆန်းသောအခြားအပိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ငါတို့အကြောင်းပြောကြမယ် Corozaတစ်နှစ်တာ၏အအေးဆုံးနေ့များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သောကောက်ရိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအငူတစ်ခုဖြစ်သည်။
Arde Lucus ပွဲတော်များ
သင်ပုံမှန်ဂါလီစီယန်အဝတ်အစားကိုသင်သိပြီးသောအခါ၎င်းကိုမည်သည့်အခါအသုံးပြုသည်ကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ ယုတ္တိဗေဒအရ Galicia မြို့အားလုံး၏ပွဲတော်များတွင်ဤဝတ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ထားသောလူများရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီးလေနှင့်တူရိယာဂီတပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။ ပထမတူရိယာမိသားစုအတွက်စကားပြန်၏ ဂါလီစီယန်ရေပိုက်တစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရင်တောင်
ဒီတူရိယာဟာအဲဒီ့သင်္ကေတတွေထဲကတစ်ခုအထိအဲဒီမြေရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအစဉ်အလာကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့် Galicia ၏ရိုးရာဝတ်စုံမပါဘဲ piper ကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ bagpipe သည် Asturian folklore နှင့် Bierzo နှင့် Sanabria ဒေသများ၏အခြေခံဒြပ်စင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် Galician တွင်ကွဲပြားမှုအချို့ရှိသည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို piper, percussionists နှင့် dancers နှစ် ဦး စလုံးသည် Galician ဒေသဆိုင်ရာဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပွဲတွေမှာရှိနေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ကမလစ်ဟင်းဘူး တမန်တော် Santiago ၏ပွဲတော်များဂါလီစီယာ၏နာယကတင်မကဘဲစပိန်နိုင်ငံသားအားလုံးပါ။
ထိုနည်းတူ၊ သူတို့သည် Lugo လမ်းများအတွင်းလမ်းလျှောက်ကြသည် San Froilán၏ပွဲတော်များ ၎င်းကဲ့သို့သောအီစတာပွဲများတွင်ပေါ်လာသည် ပျိုးခင်း y Ferrol၎င်းတို့အားလုံးသည်ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဘာသာတရားနဲ့သိပ်မသက်ဆိုင်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာပုံမှန်ဂါလီစီယန်ဝတ်စုံ ၀ တ်ထားတဲ့ဒီစကားပြန်တွေကိုတောင်မင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် piper တီးဝိုင်းများကိုတွေ့ရတတ်သည် လူးကပ်စ်မီးလောင်Lugo လူမျိုးများသည်သူတို့၏ရောမအတိတ်ကိုပြန်အမှတ်ရသည့်နေရာ၊ ပေါ်မှာ Feira Franca Pontevedra မြို့၊ အလယ်ခေတ်အတိတ်၊ (သို့) မြို့ပေါ်အခြေခံသည် Catoira ဗိုက်ကင်းဘုရားဖူးထိုနယ်မြေကိုလုယက်ရန် Norman တပ်များရောက်ရှိလာခြင်းကိုအမှတ်ရစေသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဂါစီယံဒေသဝတ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံများ ၀ တ်ဆင်ထားသောလူ ဦး ရေသည်အလွန်များပြားသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒေသတစ်ဝှမ်းလုံးမှာအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမင်းအတွက်နာမည်ကျော်တွေကိုမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မယ် ပင်လယ်စာပွဲတော် အောက်တိုဘာလတိုင်း O Grove မြို့၌ကျင်းပသည် ရေဘဝဲသြဂုတ်လဒုတိယမြောက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Carballino ၌ကျင်းပသည်။ သို့သော်ဤ cephalopod ကိုစားသုံးမှုသည် Galicia တွင်အလွန်စွဲ ၀ င်နေပြီးလက်တွေ့အားဖြင့်ဒေသအားလုံး၌၎င်းကို အခြေခံ၍ သူတို့၏ရိုးရာစားပွဲကျင်းပခြင်းနှင့်ရိုးရာ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ငါတို့သည်သင်တို့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြီ ဂါလာစီယံဒေသဝတ်စုံ အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးအတွက်ပါ ငါတို့ကမင်းရဲ့အတွေ့အများဆုံးနေရာကိုမင်းကိုပြဖို့နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အစဉ်အလာတွေကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ယခုသင်သည် Galicia သို့ သွား၍ ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်တန်ဖိုးထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » ဂါလီစီယန်ဒေသဝတ်စုံ